रुद्रपुर डायरी : रामानन्द सरको बैंकखाता र हरि दाइको गाई फार्म
वित्तीय साक्षरता अभावका कारण पछि परेको गाउँपालिकाका बासिन्दालाई अहिले स्थानीय सरकारले विभिन्न अभिमुखीकरण तालीममार्फत प्रशिक्षित गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लाग्न प्रोत्साहन गर्दै आएको छ ।
२०७३ साल असोजकाे दोस्रो साता वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी अध्ययनका लागि राष्ट्र बैंक र केही वाणिज्य बैंकका प्रतिनिधिसँग हामी रुपन्देहीको रुद्रपुर पुगेका थियौँ । राष्ट्र बैंकको प्रवर्द्धन र विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समन्वयमा त्यहाँबाट तत्कालीन गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले ‘वित्तीय जागरण राष्ट्रिय अभियान’ उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम थियो । बैंकिङ हवका रूपमा विकास हुँदै गरेको बुटवलबाट ३५ किलोमिटर दूरीमा पर्ने रुद्रपुर वित्तीय शिक्षाका हिसाबले निकै पछाडि रहेकाले त्यहीँबाट अभियान थाल्ने योजना राष्ट्र बैंक र आयोजक संस्थाले बनाएका रहेछन् ।
सबैभन्दा पहिले हामीले त्यहाँस्थित बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्‍यौँ । उनीहरूबाट थाहा पायौँ, वित्तीय संस्थाका केही शाखा भए पनि अक्सर रुद्रपुरवासी त्यहाँ कारोबार गर्दा रहेनछन् । कारण थियो, वित्तीय शिक्षाको अभाव । यसबारे अझै बुझ्न हामीले तत्कालीन शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक, रुद्रपुर शाखाका म्यानेजर लेखनाथ पौडेलको सहायता माग्यौँ । उनले दत्तचित्तले सहयोग गर्ने वाचा गरे ।
त्यसपछि हामी केही निजी र सामुदायिक विद्यालयतिर लाग्यौँ । त्यहाँको अवस्था देखेर झनै आश्चर्यमा परियो । हामीसित भैँसीहवा–४ स्थित एक बोर्डिङ स्कुलका शिक्षक रामानन्दप्रसाद मिश्रले बडो अनौठो प्रश्न सोधे, ‘बैंकमा हामी थोरै पैसा हुने मान्छेले पनि कारोबार गर्न पाइन्छ र ?’
सँगै उनले संशय पनि व्यक्त गरे, ‘दुःख गरेर कमाएको पैसा बैंकलाई बित्थामा किन दिनु ? भोलि खाइदियो भने !’
उनको बुझाइमा बैंक भनेको धनीहरूका लागि मात्र हो । यो आर्थिक रूपमा विपन्नका लागि हुँदै होइन । २०४५ सालमा एसएलसी पास गरेका रामानन्द सुरुमा भैँसीहवामै खेती किसानी गर्थे । उनले शिक्षण पेसा थालेको दुई वर्ष भएको थियो ।
उनलाई बैंक, वित्तीय संस्थामा किन, कसरी कारोबार गरिन्छ, यसका फाइदा के छन् भन्नेलगायत कुरा थाहै रहेनछ । ५८ वर्षीय रामानन्द स्पष्ट वक्ता थिए । त्यसैले थाहा नभएको विषयमा थाहा पाएका जसरी प्रस्तुत भएनन् उनी । बरु यसबारे आफ्ना विद्यार्थीलाई कक्षामा केही बेर पढाइदिन हामीसित अनुरोध गरे ।
त्यहाँबाट हामी गाउँतिर निस्कियौँ । ८० प्रतिशत रुद्रपुरवासी खेतीपाती गर्दा रहेछन् । बुटवल र भैरहवा बजारसम्म यातायात सहज भएकाले उत्पादित कृषि उपज बेच्न उनीहरूलाई खासै समस्या थिएन । त्यसैले खर्च कटाएर कतिपयको धेरथोर बचत हुन्थ्यो । तर पनि उनीहरू घरनजिकैको बैंकमा त्यो पैसा जम्मा गर्दैनथे । बरु गाउँमै ऋण लगाउँथे । कोहीचाहिँ सिरानी/सन्दुकमै पैसा थन्क्याउँथे ।
भैँसीहवाकै जीतेन्द्र साहलाई हामीले भेट्यौँ । हातमा उठेर फुटेका ठेला देखाउँदै उनले भने, ‘हेर्नोस्, यसरी दुःख गरेर कमाएको पैसा धेरै ब्याजको लोभमा दिने हुँदा डुबेको छ । मेरो ३० हजार पैसा लगेको मान्छे मेरो छेउछाउ पर्दैन ।’
बैंक, पैसा, कर्जाको सन्दर्भमा उनले हामीलाई यी सबै कुरा सुनाएका थिए । बैंकबारे उनको बुझाइ त झन् छक्क पर्ने खालको थियो । ‘बैंकमा पैसा राख्यो भने घट्छ रे’, उनले भने, ‘दुई वर्षअघि सालझण्डीको एउटा सहकारीले पैसा खाइदियो । त्यसपछि त मलाई बैंकको विश्वासै लाग्दैन । आफ्नै घरमा पैसा राखे भइगो त, किन बैंकमा राख्नुपर्‍यो ?’
आफैँ वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम अघि बढाउँदै स्थानीयलाई आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न अभिमुखीकरण तालिम दिइरहेको छ । च्याउका बल बनाउने तरिका सिकाउँदै कञ्चन गाउँपालिका कृषि शाखाका कर्मचारीहरू ।
सरकारले भर्खरभर्खरै सबै कारोबार बैंकिङ च्यानलबाट गर्ने/गराउने नीति अख्तियार गरेको थियो । यसको प्रभाव सहरोन्मुख क्षेत्रमा राम्रै परे पनि ग्रामीण क्षेत्रमा करिब शून्यजस्तै थियो । भैँसीहवाबाट उत्तरतिरका रुद्रपुर, जीतपुर, सालझण्डीका भित्री बस्तीमा बैंक र बीमासम्बन्धी जानकारी पुगिरहेको थिएन । जबकि, त्यस क्षेत्रमा व्यावसायिक माछापालन, बाख्रापालन, तरकारी खेती गर्ने किसान प्रशस्तै थिए । भैँसीहवाबाट करिब तीन किलोमिटर दक्षिणतिर केही बैंकका शाखा थिए । तर, त्यहाँ कारोबार गर्नेको संख्या नगण्य थियो ।
व्यवसायिक कृषिमा लागेकाहरूले समेत आफ्नो सम्पत्ति र कारोबारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग जोड्न सकेका थिएनन् । यही क्रममा हामीले जीतपुरका हरिशरण सापकोटासँग पनि बात मार्‍यौँ । उनले दुईवटा जर्सी गाई पालेका रहेछन् । तर, उनको नाममा कुनै फर्म दर्ता थिएन । फर्म नै नभएपछि बीमा हुने कुरै भएन । बैंकमा पैसा बचत गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सुझावलाई त उनले साफसाफ इन्कार गरिदिए, ‘नचाहिने कुरा नगर्नोस् सर ! बैंक धनीहरूका लागि हो । हामीसँग बैंकमा राख्ने त्यत्रो पैसा कहाँ हुन्छ ?’
हामीले रुद्रपुरवरपरका गाउँहरू चाहार्‍यौँ । करिब एक साता बस्दा त्यहाँको स्पष्ट चित्र देख्यौँ । त्यसैले ‘वित्तीय जागरण राष्ट्रिय अभियान’ उद्घाटनका लागि ठाउँ अत्यन्तै उपयुक्त भएको निष्कर्षमा पुग्यौँ ।
त्यसबेलाका तथ्याङ्कले देखाएका थिए, मुलुकका ६० प्रतिशत नागरिक बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर छन् । कम्तीमा २० प्रतिशत नागरिक वित्तीय कारोबार अझै साहु/महाजनमार्फत नै गरिरहेका छन् ।
जब हामीले रुपन्देहीका भैंसीहवा, रुद्रपुर, जीतपुरका ग्रामीण क्षेत्रको वास्तविक चित्र निकाल्यौँ । यथार्थ तथ्याङ्कभन्दा अझै फरक पायौँ । त्यो बेला १ महानगर, १२ उपमहानगरसहित २ सय १७ नगरपालिका र ३ हजार १ सय ५७ गाविस थिए । ७५ जिल्लामा ग्रामीण इलाका हजारौँ थिए ।
ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बहुसंख्यक मानिस वित्तीय रूपमा साक्षर थिएनन् । यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले वित्तीय शिक्षा विस्तारको अभियानलाई तीव्र पारेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्था र गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि यस अभियानमा साथ दिएका थिए ।
२६ कात्तिक २०७३ मा राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले रुद्रपुरस्थित ज्ञान निकेतन उच्च माविबाट ‘वित्तीय जागरण राष्ट्रिय अभियान’को उद्घाटन गरे । कार्यक्रममा विद्यार्थीदेखि साना किसान, उद्यमी, व्यवसायीको बाक्लो उपस्थिति थियो । वरपरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न जानकारीमूलक स्टलहरू राखे । गभर्नरले नै डेढ घण्टाजति बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कारोबार गर्दाका फाइदा, किसानले पाउने सहुलियत कर्जालगायतबारे जानकारी गराए ।
शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक, रुद्रपुर शाखाका म्यानेजर लेखनाथ पौडेलले कार्यक्रमको एक महिनापछि फोन गरेर सुनाएका थिए, ‘अचम्मै भयो । हिजोआज बैंकमा खाता खोल्नेको संख्या नपत्याउँदो गरी बढेको छ ।’ तर, त्यसयता के भयो थाहा थिएन ।
चार वर्षपछि गत साता हामी पुनः रुद्रपुर पुग्यौँ । रामानन्द प्रसादले बैंकमा खाता खोलिसकेछन् । हरिशरण सापकोटाले फार्म दर्ता मात्र गरेनछन्, मरेको एउटा गाईको बीमा रकमसमेत हात पारिसकेछन् । केही लघुवित्तका शाखा विस्तार भएछन् । त्यसबेलाको रुद्रपुर गाविस अहिले कञ्चन गाउँपालिकाको ३, ४ र ५ नम्बर वडामा परिणत भएको छ ।
गाउँपालिकामा अहिलेसम्म ग्लोबल, मेगा, एनआईसी एसिया गरी तीनवटा वाणिज्य बैंकले आफ्नो शाखा विस्तार गरिसकेका रहेछन् । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखबहादुर बस्नेतका अनुसार, महिलाहरू लघुवित्तमा समूह बनाएर लागेका छन् । कतिपय स्थानीय मिलेर बचत तथा ऋण सहकारी, कृषि सहकारी चलाइरहेका छन् । सेवाग्राही बढाउन नसकेकोमा प्रधान कार्यालयबाट चर्को दबाब खेपिरहेका सो क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा प्रतिनिधि अहिले ढुक्क छन् ।
नियामक निकायसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा समिति र अन्य संस्थाहरूबीचको समन्वयमा सञ्चालित वित्तीय साक्षरता अभियानकै कारण फागुन २०७४ देखि अहिलेसम्मको परिणाम सन्तोषजनक रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
त्यसबेला २९ सयको हाराहारीमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या आज १० हजार नाघिसकेको छ । ७ सय ५३ मध्ये अब दुईवटा स्थानीय तहमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा पुग्न बाँकी छ । अहिले झण्डै ६१ प्रतिशत नागरिक बैंकिङ पहुँचमा छन् । सरकारले बैंकिङ कारोबारलाई अनिवार्य गराउने नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै छ ।
तर, यसलाई नै अन्तिम उपलब्धि मानेर ढुक्कले बस्न नहुने निवर्तमान गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन् । ‘वित्तीय साक्षरताको क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ’, उनी भन्छन् ‘शतप्रतिशत नागरिक वित्तीय पहुँचमा आउनुपर्छ । तब मात्र समृद्धिको यात्राले गति लिन्छ ।’
किन आवश्यक छ वित्तीय साक्षरता ?
पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र क्षत्रीका अनुसार, धनको सही उपयोग गर्न सक्षम हुनु नै वित्तीय रूपमा साक्षर हुनु हो । अर्थात् वित्तीय शिक्षाले धनको बारेमा सही जानकारी दिन्छ । त्यसको सही प्रबन्ध गरी व्यक्तिलाई वित्तीय भविष्य सुरक्षित एवं उत्कृष्ट बनाउन बाटो देखाउँछ ।
‘समय धेरै नै बदलिइसकेको छ । आजको सन्दर्भमा धनी अझै धनी हुँदै गएका छन् । तर, मध्यम वर्गका मानिस गरिबीमा झरिरहेका छन्’, क्षत्री भन्छन्, ‘हाम्रा वित्तीय समस्या बढिरहेका छन् । यसका कारण समाजमा गरिबी मात्र होइन, घरेलु हिंसा, अपराध, भ्रष्टाचारजस्ता असामाजिक र आपराधिक समस्याले कहालीलाग्दो रूप लिँदै छन् । यी समस्याले हाम्रो जीवनलाई अस्तव्यस्त बनाइदिएका छन् ।’
उनका अनुुसार यी कुरालाई सूक्ष्म रूपमा बुझियो भने वित्तीय साक्षरताको महत्त्व अझ गहनसँगले बुझ्न सकिन्छ ।
वित्तीय जागरणले मानिसको विचारमा परिवर्तन ल्याउने र यसबाट काम, शैली फेरिने नेपाल बताउँछन् । ‘हाम्रो कार्यशैली फेरिँदा परिणाम पनि बदलिने छ’, पूर्वगभर्नर नेपाल भन्छन्, ‘नतिजा चित्तबुझ्दो हुँदा हाम्रो जीवनस्तरमा फेरबदल आउनेछ । यसको फाइदा परिवार, समाजहुँदै राष्ट्रले समेत पाउनेछ । अर्थात्, हाम्रो वित्तीय विचार विस्तृत भयो भने समाजमा वित्तीय परिवर्तन देखिनेछ । समाज वित्तीय रूपमा प्रशिक्षित भयो भने देशको वित्तीय अवस्थासमेत बलियो बन्नेछ । तर, यो सबैका लागि वित्तीय साक्षरता अनिवार्य छ ।’
आर्थिक समृद्धिको संकल्पका साथ अघि बढेको नेपालजस्तो देशले त वित्तीय साक्षरताको क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्नुपर्ने पूर्वगभर्नर क्षत्रीको धारणा छ । ‘६१ प्रतिशत मानिस वित्तीय पहुँचमा पुग्नु विगतको तुलनामा सन्तोषजनक भए पनि पहिलो विश्वसँग दाँज्दा यो कुनै ठूलो उपलब्धि होइन । शतप्रतिशतमा पुग्ने लक्ष्य लिनुपर्छ’, उनी भन्छन् ।
२०७४ सालमा रुद्रपुरमा जुन स्थिति थियो, मुलुकमा त्यस्तै खाले गाउँ थुप्रै छन्, जहाँ आज पनि मानिसहरू बैंकमा कारोबार गर्दैनन् । त्यसैले सरकार र सरोकारवाला संस्था/क्षेत्रबीच अझ प्रभावकारी समन्वयका साथ वित्तीय साक्षरता अभियानलाई विस्तार गर्न आवश्यक रहेको क्षत्री बताउँछन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उद्देश्य थोरै फाइदा लिएर नागरिकलाई बढी फाइदा दिलाउनु रहेको भन्दै पूर्वगभर्नर नेपाल भन्छन्, ‘वित्तीय शिक्षाको प्रचार गर्दा फाइदा सबैलाई छ । वित्तीय साक्षरता बढाउनुको अर्थ नागरिकलाई सहज जीवनयापनका लागि सघाउनु हो । उनीहरूका वित्तीय समस्या समाधानका लागि मद्दत गर्नु हो । वित्तीय साक्षरता बढाउन भूमिका खेल्नु हामी सबैको कर्तव्य पनि हो । यसबाट हामीसँगै सबैको आर्थिक कल्याण हुनेछ । वित्तीय साक्षरता बढाउन सके सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल निर्माणको जग बस्नेछ ।’
राष्ट्र बैंकको एउटा सानो कार्यक्रमले रुद्रपुरमा त्यस्तो बदलाव ल्यायो । अझ अभियानमा सम्पूर्ण सरोकारवाला संस्थाको सक्रिय र निरन्तर सहभागिता रहने हो भने त यसको प्रभाव कति फराकिलो हुन्थ्यो होला ? कति रामानन्दहरूले बैंकबारे बुझ्थे होलान्, बैंकमा खाता खोल्थे होलान् अनि आफूजस्ता वर्गलाई लक्षित गरी ल्याइएका सहुलियत कर्जाबाट उद्यमशीलतामा लाग्थे होलान्, कति हरिशरणहरूले फार्म खोलेर त्यसको बीमा गरी आर्थिक जोखिम हस्तान्तरण गर्थे होलान् ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन २७, २०७७, १४:३६:००